Waxay ahayd inaan dhinto si aan u noolaado! – Kaasho Maanka
Nolosha, markaa saqiir tahay aqoonsi iskuma lihid, qofkaa tahay bulshadaa ku barta, haddii Waxay dadka naftaada kaa barayaan iyo waxay naftaada dareemayso isla-hayn jahwareer ayey leedahay. laakiin markaa 13 ama 14 jir tahay waa inaad samaysaa waxay bulshadaada kaa dooneyso, awood uma lihid, inaad bulshada la hor tagto runtaada. Waxay kusoo bareen wax ka duwan oo la imaatid xasaasiyo ayey ka qaadaan qofka xanuunka dareemayana waa adiga, sidaa darteed, waa inaad naftaada badbaadisaa!
Markaan sidaas ogaaday ayaan is dilay!! Markaasaa Guugal (Google) weydiiyay “sida nin cml loo fariisto!”, “ sida nin cml loo hadlo”, “ sida nin cml loo socdo”, “sida nin cml loo qoslo” Markaasaa saaxiibadeey dhan qubay! Markaasaa dadkoo dhan ka aamin baxay! Markaasaa bartay sida loo jilo qofaanan ahayn!
Dadka qaar, waa ka badbaaday laakiin kuwo ayaana ka badbaadin. Waxay dheheen “sida gabdhihii baa gacmo yaryar tahay, sida gabdhahaa cod yaryar tahay iyo sida gabdhahaa faruuryo gadgaduudan tahay” dadkaas sida looga badbaado weligey ma baran, cidnana ima barin. Gacmaha miyaan jaraa? Faruuryaha maxaa ku smaeeya si gaduudka uga ba’o? ma aamusaa si ay codkaygaba u maqlin? Ma iska qariyaa? Guriga miyaan iskaga jiraa?
Laakiin kuwa guriga joogo iyagana waxbadan kama fiicna kuwa bannaanka, maxaa yeelay, weligood imay dhihin “noormal ayaa tahay!” Laakiin waa jeclahay iyaga marmarsiiyana waa u sameeyaa;- Lagayaaba iyaga xattaa in jiritaankayga dhib ku qabeen, malaha wiil ay sadaqeen karaan waan ahaa, laga yaabaa ayaga xataa ceeb inee dareemayeen iney dhaleen wiil gacmo yaryar, af gaduudan, codkiisana jilicsanyahay, lagayaabaa iyaga xataa inay awoodin inay dhahaan “wax kaama qaldana!” oo bulshada inteedaa kale ka baqayeen! Ugu yaraan ayaga afkay xirteen- aamusna xal ma noqon!
QORMO LA XIRIIRTA: Maangal Miyaa Naceybka Loo Qabo Dadka Isku Jinsiga (LGBT)
Kuwa ayaa ilaa haatan quusan, markii hore waxay dheheen waa dookh, markay ogaadeen inay dookh ahayn waxay dheheen waa imtixaan oo Ilaahay ayaa kugu imtixaamayo. Aniga soo maaha;- Ma aaminsani in Ilaahay jiro, laakiin haduuba Ilaahay jiro, waa hubaa inuu isagu gay iga dhigay, asagoo waxaanan dooran iga dhigay haduuba sii fiirsaday waxa dhib iyo culeys iga soo gaaray— masugi karo in lagaaro qayaamaha si aan ula kulmo oo wajiga uga candhuufo! Kuwana waxay ii maleeyaan inay isii biiqsan karaan— ujeedada ma ahan inaa ibaratid laakiin inaa igu wareertid!
W/Q: Saabir Yare 18th August 2020